घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू मार्कस थोरम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो जीवनीले मार्कस थुराम बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार तथ्य / जीवन, प्रेमिका / पत्नी, व्यक्तिगत जीवन र जीवनशैली को पूर्ण कभरेज दिन्छ। यो उनको जीवन कहानी को एक पूर्ण विश्लेषण छ, सही आफ्नो शुरुआती दिन देखि जब उहाँ प्रसिद्ध बने।
मार्कस थुराम जीवन कहानी उसको बाल्यकालका दिनहरू देखि आज सम्म। ।: इन्स्टाग्राम र ट्विटर
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ उहाँaका उत्कृष्ट उदाहरण हुनुहुन्छ फुटबलर जसले आफ्नो प्रसिद्ध बुबाको पदचिन्ह पछ्याए। यद्यपि केवल केही प्रशंसकहरूले मार्कस थुरामको जीवन कहानी पढ्ने विचार गरेका छन् जुन अत्यन्त प्रभावशाली छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मार्कस थुराम बाल्यकाल कहानी:
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उनको उपनाम "Tikus" हो, र उनको पूरा नाम मार्कस लिलियन थुराम-उलिएन हुन्। उनी अगस्त १61997। को XNUMXth दिनमा इटालीको पर्मा शहरमा उनकी आमा सान्द्रा थुराम र बुबा लिलियन थुरामको जन्म भएको थियो। मार्कस थुरमका बाबुआमाले उनलाई परिवारको पहिलो छोराको रूपमा पाएका थिए र उनको जन्म पछि उनीहरूले उनको नाम जमैका कार्यकर्ता 'मार्कस गरवे' भनेर राखे।
दोस्रो पुस्ताका फुटबलर प्रायः उसको बच्चा भाईसँगै हुर्केका थिए जो उनी five बर्ष भन्दा जेठा छन र खफ्रेन थुराम भन्ने नामबाट जान्छ। तल चित्रित, दुबै केटाहरू मार्कस र खेफ्रेनले प्रारम्भिक वर्षहरू पर्मामा बिताए जहाँ उनीहरूका बुवाले उनको फुटबल खेले शहरको टोली- पर्मा क्याल्सिओ १ 1913 १XNUMX मा खेले।
सानो मार्कस थुराम आफ्नो सानो भाइ, खेफ्रेन थुरामको साथ हुर्किए। ।: इन्स्टाग्राम
जे होस् इटालीमा जन्मिए पनि मार्कस आफ्नो परिवारको देश फ्रान्स प्रतिनिधित्व गर्छन्। सत्य यो हो कि उनका बुवा १ –– – -२००1996 बीच इटालियन क्लब पर्मा र जुभेन्टसका लागि खेलेका थिए। ती वर्षहरू ऊ र उनको भाइ दुबैको जन्मेको समयसँग मेल खान्छ।
मार्कस Thuram परिवार पृष्ठभूमि:
धनी परिवारहरूबाट आएका फुटबलरहरूको जीवन ठूलो सुरु हुन्छ, यदि तिनीहरू समस्यामा परे पनि। जबकि यो सँगी फ्रान्सेली स्ट्राइकरहरू लाई उनको पुस्ताको मनपराउन सजिलो थिएन जीन-फिलिप मतेटा र नील मापेय, हाम्रो आफ्नै मार्कससँग सबै थोक थियो, सबै उनको धन्यवाद पिता लिलियनलाई।
मार्कस थुरमका अभिभावक, लिलियन र सान्ड्रा त्यस्तो प्रकारका थिए जसले आफ्ना केटाहरूलाई खेलौनाको नयाँ संग्रह सँभाल्न सक्दछन्। जे होस्, यो खेलौना भन्दा उपहार को रूपमा फुटबल बल को अधिक थियो। सत्य यो हो कि फुटबल पैसाले मार्कस थुरमको परिवारलाई उच्च बनाए र उनको धनी पारिवारिक पृष्ठभूमिका लागि जिम्मेवार थियो।
मार्कस Thuram परिवार मूल:
स्पष्टताको उद्देश्यका लागि, इटालियन जन्म भएका फुटबलरको बुवा र आमा फ्रान्सेली नागरिक हुन्, उनको परिवारको जरा सीधा अफ्रिकामा पत्ता लागेको छैन। बरु, मार्कस थुरामका बुवा र आमा ग्वाडेलूप मूलका हुन्। यो देश दक्षिणी क्यारिबियन समुद्रमा अवस्थित टापु हो।
मार्कस थुरामको उसको बुवा र आमासँग एक प्यारो बच्चाको फोटो। उसको परिवारको मूल गुआदेलूप हो। ।: M ० मिनेट
के तपाईंलाई थाहा थियो? ... साथी फ्रान्सेली कथा थियरिरी हेनरी र फुटबलरहरू मन पराउँछन् एंथोनी मार्शल र किंग्स्ली कोमैन तिनीहरूको परिवारको उत्पत्ति पनि ग्वाडेलोपबाट भयो। यो पनि नबिर्सनुहोस्, यो देश पहिलो अफ्रिकी दासहरूको घर थियो जो सन्‌ १ 1650० मा त्यहाँ आएका थिए।
मार्कस Thuram शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
परिवारको सपनाहरू बाँच्नको लागि, फुटबलर र उसको भाइले उनीहरूको बुबाको पाइला अनुसरण गर्ने निर्णय गरे। मार्कस थुरमको परिवारमा, फुटबल सधैं ध्यान केन्द्रित भएको छ। अवकाश पाउने समय आइसकेपछि परिवारका मुखिया (लिलियन) ले एउटा रणनीति बनाए जसमा आफ्ना छोराहरूले पनि सपनाहरुमा जीवन बिताएको देख्नेछन्।
२००//२००2004 seasonतुमा, मार्कस बुबा, आफ्नो जुभेन्टस केन्द्रीय प्रतिरक्षा स्थिति एक जवानले हटाए जियोर्जियो चीइलिनी जसले आफ्नो ट्यूरिन क्यारियर शुरू गर्दै थियो। बुढो बुवाले आफ्नो मुटुमा लगाएको बुढो बुबाले थप दुःखद् हृदय विकृति। एक ठूलो हृदय भएको फ्रान्सेलीको क्यारियर अन्त नजिकै देख्यो।
तपाईं, मार्कस बाबा, Calciopoli घोटाला को बार्सिलोना सस्तो हस्तान्तरण पायो जुन जुभ सेरी बी संग relegated हो देख्यो कि, दुर्भाग्यवस, उनको क्यारियर दुई सीजन भन्दा बढी टिक्न सक्दैन।
आफ्नो क्यारियर समाप्त गर्नु अघि, १ 1998 XNUMX World विश्वकप विजेताले आफ्नो परिवारमा बढी ध्यान दिने निर्णय गरे। उनले सुनिश्चित गरे कि उनको छोरो मार्कसले फ्रान्समा आफ्नो क्यारियर शुरू गर्दछ र अरू कतै छैन। कारण किनभने उनी आफ्ना केटाहरूलाई उनीहरूको पारिवारिक आधारका बारे जान्न चाहन्थे। पौराणिक बुवाले आफ्ना दुवै छोराहरूलाई पेरिसको पश्चिममा रहेको फुटबल एकेडेमी ओलम्पिक दे न्यूलीसँग भर्ना गरे।
मार्कस थुरम जीवनी- प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
ओलम्पिक डि न्युलीसँग चार बर्ष बिताएपछि, मार्कस सफलताले उनलाई आफ्नो क्यारियरको महत्वपूर्ण चरणमा प्रगति गरिरहेको देखिन्थ्यो। उसको बुवाले उनलाई एसी बोलोन-बिलान्कोर्टमा हस्तान्तरण गर्नुभयो, जुन एक पटक प्रख्यात फ्रान्सेली तारा रहेको एक प्रख्यात प्रतिष्ठान हो एलन सेन्ट-मैक्सिम उनीहरूको सर्वश्रेष्ठ एकेडेमी स्टारहरूको रूपमा।
आफ्नो नयाँ एकेडेमी मा, मार्कस यो अद्भुत बच्चा भयो, जसले आफ्नो बुवाले गरे जस्तो गरी बचाउनुको सट्टा गोल स्कोर गर्न प्रतिष्ठा कमायो। युवाले क्लबलाई धेरै जित्ने क्षण र एकेडेमी सम्बन्धी सम्मानमा मद्दत गर्‍यो।
मार्कस Thuram जीवनी- फेम कहानी कहानी:
फ्रान्सेली एकेडेमी, एसी बुलोन-बिलनकोर्टको विस्तार पछि, मार्कसले २०१२-२०१ season सत्रमा सोचाक्सको लागि प्रस्थान गर्ने निर्णय गरे। उनीहरूलाई छोडेको लगत्तै पछि, खफ्रेन थुराम (उसको बच्चा भाई) पुरानो एकेडेमीमा भर्ना भए, जहाँ उसको ठूलो भाईले छोडे।
के तपाईंलाई थाहा छ?… दंतकथा बुबा, लिलियनको आफ्नो छोराको चालमा सोचाक्समा सहयोगी हात थियो। मार्कस थुरम घरानाको खुशीको लागि, केटाले सफलतापूर्वक युवा एकेडेमीबाट स्नातक गरेन; उनले चमत्कारी रूपमा फ्रान्सेली U-17 कल-अप प्राप्त गरे।
राष्ट्रिय युवा कल-अप पछि तुरून्त सफलता। के तपाईंलाई थाहा छ?… मार्कस साथी फूटबलरहरू बीच थिए- मनपराउनेहरू किलियन एमपीपी र इस्का डियोप जसले फ्रान्सलाई २०१ U यूईएफए अन्डर १ Champion च्याम्पियनशिप जित्न सहयोग गरे।
युवा २०१ the यूईएफए यूरोपियन अन्डर १ winning विजेता टोली मध्ये एक थिए। 📷: Actusen र UEFA
मार्कस थोरम जीवनी- फेम टु फेम स्टोरी:
फुटबल क्लब सोचौक्स-मोन्टबिलियार्डसँग केही राम्रो छ वर्ष पछि, मार्कसले एउटा चेल्सी एफसी लिजेन्डको चरणहरू अनुसरण गर्ने निर्णय गरे - अरू बाहेक अरू कोही छैन। Didier Drogba। उनले गुईamp्गम्पका लागि साइन अप गरे, एउटा क्लब जसलाई उनी विश्वास गर्छन् कि उनको थुराम नाम उच्च स्वरमा गाउनेछ, शीर्ष युरोपेली क्लबहरूको सुनुवाईमा।
गुइamp्ग्याम्पमा, स्ट्राइकरले आफ्नो ध्यान स्कोर गर्न सुरु गर्नु भन्दा पहिले उनलाई चाहिएको ध्यान आकर्षण गरे। के तपाईंलाई थाहा थियो?… मार्कस, PSG सँग एक खेल पछि, इटालियन गोलकीपिंग लीजेन्डसँग भावनात्मक मुठभेड भयो Gianluigi Buffon, जो एक दीर्घकालीन मित्र र आफ्नो बुवा, Lian पूर्व टीमका साथी हो।
मार्कस थुरामले आफ्नो बाल्यावस्थाको आइडल र बुबाको घनिष्ठ मित्र भेट्टाए- अरू कुनै लिजेन्ड्री बफन थिएन। ।: IG
पौराणिक स्टपरसँगको उनको भेट पछि, स्ट्राइकरले अवसरको लागि आफ्नै नाम कमाउन शुरू गरे। मार्कसको पहिलो प्रशंसाले उनको टीमलाई २०१/2018/२०१2019 कूपे डे ला लिगको क्वार्टर फाइनलबाट PSG हटाउन मद्दत गरिरहेको थियो।
उनका नाम मिडियामा ठूला गोलहरू बनाए पछि जर्मन फुटबल क्लब बोरुसिया मिन्चेng्गलाद्बाच आकर्षित भयो र आफ्नो हस्ताक्षरका लागि गुइंग्याम्पमा छापा मारे। क्लबमा सामेल भएदेखि मार्कसले पछि हेरेन।
जब मार्कस थुरमको जीवनी प्रस्तुत भइरहेको छ, फुटबलर व्यापक रूपमा फ्रान्सलाई अर्को सुन्दर प्रतिज्ञाहरू र महान पछि फुटबलको फ्रान्को-ग्वाडेलूप पुस्तालाई राम्रो मानिन्छ थियरिरी हेनरी। उसले लक्ष्य, प्राविधिक, उच्च जम्प पावर र उत्सव शैली देखि सबै चीज पायो। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
TIKUS हालै आफ्नो फ्रान्सेली फुटबलि Gene जेनेरेसनलाई सुन्दर प्रतिज्ञाहरूको रूपमा मानिन्छ। 📷: बुन्डेस्लिगा र आईजी
मार्कस Thuram सम्बन्ध जीवन- प्रेमिका, पत्नी?
पक्षले उनलाई पिचमा गोल गरिरहेको देखी, फुटबल प्रशंसकहरू हालै छोरा लिजेन्डरी फुटबलरको बारेमा बढी चासो लिएका छन्। फलस्वरूप, उनीहरूले अन्तिम प्रश्नमा चिन्तन लिएका छन् ... मार्कस थुरमको प्रेमिका को हो?
धेरै प्रशंसकहरूले सोधेका छन्… मार्कस थुरमको प्रेमिका को हो? ।: इन्स्टाग्राम
सुरुमा, मार्कस थुराम एक सुन्दर फुटबलर हुन्, जसको तीखो देखिन्छ महिला प्रशंसकहरूको मुटु पग्लन सक्षम छ जो आफूलाई सम्भावित प्रेमिका र पत्नी मान्दछन्।
सत्य भन्नुको लागि, सामाजिक मिडियामा मार्कस थुराम एकल देखिन्छ। जे होस्, यो हुन सक्छ कि फुटबलरको एक प्रेमिका छ तर उसले आफ्नो सम्बन्ध सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरेको छ। पिहर्बस, मार्कस थुरामका आमा बुबाले उनीहरूको छोरालाई गैर फुटबल खेलका लागि मिडिया हेडलाइटहरू बनाउनुको सट्टा परिवारको गौरवलाई कायम राख्नमा बढी ध्यान दिन सल्लाह गरेको हुनुपर्छ।
मार्कस Thuram व्यक्तिगत जीवन:
सबैभन्दा पहिला, फुटबलर एक रचनात्मक, नाटकीय र एक आत्म-विश्वास व्यक्ति हो। उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ जसको अफ-पिच व्यक्तित्व प्रतिरोध गर्न गाह्रो छ। TIKUS, उहाँ उपनाम भएको छ, ठूलो छ, लामो, कडा र आत्म-सम्मान वा आत्म-महत्व को एक भावना छ।
मार्कस थुरमको व्यक्तिगत जीवनले तपाईंलाई उसको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। ।: Picuki
मार्कस थुरमको शौकको सन्दर्भमा, यस्तो देखिन्छ कि उनी एनबीए फ्यान हुन सक्छन, जो बास्केटबल खेल्न मन पराउँछन्। तीखो स्ट्राइकरसँग चम्किलो चरित्र पनि छ, एक जसले उसलाई कहिलेकाँही एक प्रदर्शन 'जंगल स्थिति को राजा'। तर समग्रमा, मार्कस मनपर्दैन मारियो बाल्टोटेल.
जंगल स्थिति को राजा। जे होस्, ऊ बालोटेली जस्तो छैन। ।: ट्विटर
मार्कस थुरम जीवनशैली:
उसको जीवनशैलीबारे जान्नु तपाईंलाई पक्कै पनि उसको सम्पूर्ण तस्वीर बुझ्नमा मद्दत गर्दछ। सबैभन्दा पहिला, मार्कस थुराम कोही हुन् जसले पैसा कमाउन सुपरहीरो ग्याजेटहरू खर्च गर्न सक्दछन् - विशेष गरी साइबरनेटिक / रोबोटिक गुणवत्ताको साथ।
फ्रान्सेली फुटबल एक विलासितापूर्ण जीवन शैली बाँचिरहेका छन्। उहाँ धनी हुनुहुन्छ र जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ।: IG
एक धनी परिवारबाट आउँदैछ, 3,200,000,२००,००० युरो वार्षिक तलब र M मिलियन यूरो नेट वर्थ पक्कै पनि क्रूर मोटर वाहनको शस्त्रागार बनाउन पर्याप्त छ। मार्कस थुरमको कारको फोटोलाई हेरेर, यो आफ्नो मनपर्ने रंग फिर्ता आएको देखिन्छ, र उसले मर्सिडीज ब्रान्ड मन पराउँछन्।
मार्कस थुरमको कार- उहाँ मर्सिडिज बेन्ज G-Class SUV लक्जरीको प्रशंसक हुनुहुन्छ। 📷: Insta
यसको आफ्नो जीवनशैलीमा, यो मार्कस थुरमको शौक मध्ये एक बास्केटबलको साथ यात्रा गरिरहेको देखिन्छ। स्ट्राइकरले आफ्ना पैसा कमाउन दुबईको मरुभूमि सफारीमा यात्रा गर्न रुचाउँछन्। उसको विश्वास छ कि जीवन अचम्मको छ, र यो सधैं यस्तै रहिरहनु पर्छ।
मार्कसले आफ्ना पैसाहरू दुबईको मरुभूमि सफारीमा बिताउँछन्। ।: Picuki
एक विश्व कप विजेता छ कि एक घर मा जन्म भएकोमा, कुनै श foot्का बिना, कुनै पनि फुटबलर को लागी एक ठूलो प्रेरणा को स्रोत हो। यस खण्डमा, हामी तपाइँलाई मार्कस थुरामका आमा बुबा र तिनका परिवार सदस्यहरूको बारेमा थप तथ्यहरू ल्याउने छौं।
मार्कस थुरमको बुबाको बारेमा:
तपाईलाई थाहा होला, मार्कसको सुपर ड्याड एक जीवित फ्रान्सेली किंवदन्ती हो। उनका पूरा नाम रुड्डी लिलियन थुराम-उलिइन हुन् र उनी १ 1 1972२ जनवरी १ को जनवरीमा फ्रान्समा होइन, गुआदेलूपको सबैभन्दा ठूलो शहर पोइन्टे-पित्रेमा जन्मेका थिए।
मार्कस थुरामका बुबा, लिलियन थुरमलाई भेट्नुहोस्। ऊ आफ्नो छोरासँग राम्रो संगति भएकोमा रमाउँछ। उनलाई विश्व कप लिजेन्डका रूपमा पनि चिनिन्छ। ।: डेलीमेल
लिलियन एक सम्बन्ध विच्छेद हो, यसको मतलब उसले मार्कसको आमा, सान्द्रासँग विवाह गरेको छैन। अगाडि बढ्दै उनले फ्रान्सेली टिभी च्यानल पत्रकार करीन लेमरचन्दलाई डेट गर्न थाले। दुःखको कुरा, दुबै प्रेमीहरूले २०१ relationship मा उनीहरूको सम्बन्ध समाप्त गरे।
आफ्नो छोरो मार्कस जस्तो नभए, लिलियनको गुआदेलूपमा एउटा नम्र पालन पोषण थियो जहाँ उनी सडक र तटहरूमा फुटबल खेल्थे। ११ बर्षको उमेरमा, उनको परिवार फ्रान्समा बसाई सरे, जुन उनले आफ्नो फुटबल खेले र पछि राष्ट्रियकरण गरे।
लिलियन थुराम मिडफिल्डरमा आक्रमण गर्दै थिए आफ्नो सामान्य बचाव स्थितिमा जान अघि। उनको नाममा धेरै व्यक्ति, क्लब र राष्ट्रिय सम्मान छन्, र प्रसिद्ध उनी फिफा १ 1998 XNUMX World विश्वकप विजेताहरू मध्ये एक हुन्। लिलियन थुरम, कुनै श doubt्का बिना, मध्ये एक मानिन्छ विश्व फुटबल इतिहासको सबैभन्दा ठूलो रक्षकहरू.
मार्कस थुरामकी आमाको बारेमा:
ठूली आमाहरूले ठूला पति र छोरा उत्पादन गरेका छन्, र सान्ड्रा थुराम (तल चित्रमा) ती सुपर आमा हुन्। उनी उत्कृष्ट लिलियन थुरामकी पूर्व पत्नी र मार्कस र खेफ्रेनकी आमाको रूपमा वर्णन गरिन्।
मार्कस Thuram को आमा, Sandra Thuram भेट्नुहोस्। उनी लिलियन थुरमको पूर्व पत्नी हुन्। ।: इन्स्टाग्राम
मार्कस थुरमको आमा बाल्यकालको साथी थिइन जसले प्राथमिक विद्यालयमा छँदा उनको पूर्व पतिलाई भेटिन्। दुबै प्रेमीहरूले उनको बिहे जुन जून १ ofaof को तेस्रो दिनमा २०० split मा बिभाजित भयो। फुटबल फ्यानहरूले सान्ड्रालाई मार्कस र उनको सानो भाइलाई हुर्काउनमा उनकी आमाको भूमिकाका लागि याद गरे।
मार्कस थुरामका भाइहरूको बारेमा:
खफ्रेन थुराम मार्च २००१ को २th औं दिनमा जन्मे, मार्कसका कान्छो भाई। तपाईं उहाँ आफ्नो ठूलो भाइ को रूप मा प्रसिद्ध छैन, उहाँ पनि एक पेशेवर फुटबलर हो। Khephren, आफ्नो पौराणिक बुबा जस्तै मोनाको संग आफ्नो वरिष्ठ क्यारियर शुरू गर्नुभयो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… मार्कस थुरामका आमाबुबाले मिश्री फिरऊनको 'खफ्रा' पछि उसको सानो भाइ (तल चित्रमा) नाम दिन राजी भए। किन उनीहरूले त्यसो गरे हामी अझै बुझ्दैनौं।
मार्कस थुरामको भाइ- Khéfren Thuram लाई भेट्नुहोस्। ।: WorldOfFootballHD
मार्कस थुरम काकाको बारेमा:
फ्रान्सेली तारा काका चाचा छ गायत थुराम। उहाँ मार्कस थुरामका बुबा (years वर्ष उसको जेष्ठ) का जेठो भाई हुनुहुन्छ। गातान थुराम एन्थोनी थुरामका बुबा हुन्, जो मार्कसका काका हुन्।
मार्कस थुराम हजुरबा हजुरआमाको बारेमा:
सबै ग्रानिजहरू मध्ये, सबैभन्दा लोकप्रिय उहाँकी बुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ जो मारियाना क्रिस्टियान थुरमको नामबाट जान्छन्। मारियानाले आफ्नो छोरा (लिलियन) लाई अत्यन्तै गरीवीमा हुर्काइन् र उनी यति सफल हुन्छन् भनेर विश्वास गर्न अझै गाह्रो लाग्छ, १ 1998 XNUMX world को विश्वकप जित्न र फ्रान्सेली लीजेन्ड बन्न पुग्यो।
मार्कस थुरम तथ्यहरू:
हाम्रो बाल्यकाल कहानी र जीवनी को अन्तिम गोद मा, हामी तपाईं ल्याउन केहि तथ्यहरू जुन तपाईं फुटबलर को बारे मा कहिल्यै थाहा थिएन।
तथ्य # १- मार्कस थुराम वेतन ब्रेकडाउन
अगाडिको बरुसिया मöचेhe्ग्लाद्वाचसँगको सम्झौतामा उसले ठूलो तलब कमाइरहेको देख्छ M. M मिलियन यूरो प्रति वर्ष। हामीले मार्कस थुरमको भुक्तानी औसत मान्छेको तलबको साथ तुलना गर्यौं, र यो निश्चित राम्रो लाग्दैन। तपाईंलाई देखाउँनु अघि, यो यो हो जुन हामीले स numbers्ख्यामा उसको तलब क्रन्च गरिसके पछि।
प्रति महिना 266,667 XNUMX $ 288,958 233,333 २XNUMX।
प्रति हप्ता 61,538 XNUMX $ 66,580 53,846 २XNUMX।
प्रति दिन € 8,767 $ 9511 £ 7,671
प्रति घण्टा € 365 $ 396 £ 320
प्रति मिनेट € 6.09 $ 6.6 £ 5.33
प्रति सेकेन्ड € 0.10 $ 0.11 £ 0.09
मार्कस थुरम यही हो कमाई गरिएको छ किनकि तपाईं यो पृष्ठ हेर्न शुरू गर्नुभयो।
तथ्य # १- औसत मान्छे संग आफ्नो तलब तुलना
के तपाईंलाई थाहा छ?… उसको आफ्नै देश (फ्रान्स) मा, औसत नागरिकलाई लगभग years बर्ष र months महिना लाग्नेछ € २7।, जुन मार्कसले एक महिनामा कमाएको रकम हो।
यसले औसत जर्मन नागरिक (years बर्ष र months महिना), औसत बेलायतको नागरिक (years बर्ष र months महिना), र संयुक्त राज्य अमेरिकाको औसत नागरिक (years बर्ष र दुई महिना) लाई मार्कस थुरमको मासिक आम्दानी बनाउन पनि लिन्छ।
तथ्य # १- मार्कस थुराम फिफा रेटिंग्स:
मार्कस थ्रुमको जीवनी लेख्दा, उहाँ २२ वर्षको हुनुहुन्छ र फिफामा उत्कृष्ट काम गर्दै हुनुहुन्छ। तलको तथ्या from्कबाट न्याय गर्दा, यो अगाडि देखा पर्दछ, जस्तै उसको स्तरका अन्यहरू - को मनपर्दो लौटोरो मार्टिन र यहोशू राजा सबैले आधुनिक-दिनको स्ट्राइकरको पूर्व शर्त पाएका छन्।
मार्कस थ्रुमको जीवनी राख्दा, उहाँ २२ वर्षको हुनुहुन्छ र आफ्नो फिफा तथ्या on्कमा खराब गरिरहनु भएको छैन। 📷: SoFIFA
तथ्य # १- मार्कस थुराम धर्म:
अगाडि असुरक्षित हुन सक्छ। त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन जुन मार्कस थुरामका बाबुआमाले उनलाई इसाई धार्मिक शिक्षाको पालनामा हुर्काए भन्ने तथ्यलाई दर्शाउँछन्। लिलियन थुराम, उनका बुवा, समलि sex्गी विवाहलाई समर्थन गर्ने प्रयासमा वर्षौंदेखि धर्मको बिरूद्ध छन्।
तपाईले मार्कसलाई धार्मिक मोडमा देख्नु भएन, त्यहाँ अझ धेरै सम्भावना रहेको छ कि ऊ आफ्नो आमाबाट क्याथोलिक हुन सक्छ। के तपाईंलाई थाहा छ? ... ग्वाडेलोपको 80०% जनसंख्या (मार्कस थुरमको पारिवारिक जरा) रोमन क्याथोलिकहरू हुन्।
पुरा नाम: मार्कस लिलियन थुरम-उलिएन
जन्मे: August अगस्त १61997,, पर्मा, इटाली।
अभिभावक: लिलियन थ्रुम (पिता) र सान्ड्रा थुराम (आमा)
सिबलिंग: Khephren Thuram
चाचा गायन थुराम
सौतेनी आमा: करीन लेमरचन्द
शौक: यात्रा र बास्केटबल
नेट मूल्य: १.7मिलियन यूरो
यती टाढा रहनका लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्छौं। हामी मार्कस थुरमको जीवनीको बारेमा यस लेखमा लिनुभएको समयको हामी कदर गर्दछौं।
कृपया हाम्रो टिप्पणी सत्रमा फारवको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ भनेर बताउनुहोस्। उदाहरण को लागी ऊ Thuram परिवार को विरासत राखेको जस्तै देखिन्छ कि उनी आफ्नो महान बुबा भन्दा राम्रो बाहिर बारी?
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 17, 2020
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य
केविन गेमियो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य